ဆူနာမီနှင့် ဂျပန်ရောက် မွန် > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် / ဆူနာမီနှင့် ဂျပန်ရောက် မွန်
ဆူနာမီနှင့် ဂျပန်ရောက် မွန်
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ March 19, 2011 မေးမြန်းချက် Leaveacomment 227 Views
ငလျင်လှုပ်ပြီးနောက် မြင်တွေ့ရသည့် မြင်ကွင်း
မိကျဲဂို-မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ဖူကူရှီးမားတွင် လှုပ်ခဲ့သည့် မြေငလျင်သည် ငလျင်ပြင်းအား ၉ မဂ္ဂနီကျု နီးပါးရှိပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၁၄၀ နှစ်အတွင်း အကြီးဆုံး လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် မြေငလျင်တခု ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဆူနာမီ ရေလှိုင်းကြီးများ ဖုံးလွှမ်းမှုဒဏ်ကိုလည်း ခံခဲ့ရသည်။ ယင်းနောက် ရက်ပိုင်းအတွင်း နျူကလီယားဓာတ်ပေါင်းဖိုများ ပျက်စီးခဲ့သည့်အတွက် ဓါတ်ရောင်ခြည် ယိုစိမ့်မှုများနှင့် လူထုအကြား စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မွန်လူမျိုးတို့၏ အခြေအနေကို သိရှိရန်အတွက် မြေငလျင်လှုပ်သည့် ဖူကူးရှီးမားဒေသနှင့် ၁၅၀ မိုင် (၂၄၀ ကီလိုမီတာ) ဝေးသည့် တိုကျိုမြို့တော်တွင် နေထိုင်သည့် ပုညကာရီ မွန်အမျိုးသားများအဖွဲ့ (ဂျပန်) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ နိုင်ချမ်းဟကောင်းကို လွတ်လပ်သော မွန်သတင်း အေဂျင်စီမှ မိကျဲဂို က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါသည်။
မေး။ ။ မြေငလျင်လှုပ်တဲ့အချိန် ဘယ်မှာရှိနေလဲ?
ဖြေ။ ။ တိုကျိုဘူတာမှာ။
မေး။ ။ မြေငလျင်လှုပ်တဲ့အချိန် ကြုံရတာလေး ပြောပြပေးပါလား?
ဖြေ။ ။ တိုကျိုဘူတာတံခါးကို ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ တုတ်ကောက်နဲ့ အသက်ခပ်ကြီးကြီး လူတယောက် မြေကြီးမှာ လဲကျသွားတယ်။ ကျနော်ထင်တာက အော် အသက်ကြီးလို့ မူးပြီး လဲကျသွားတယ်ပေါ့။ သူကို့ ဝိုင်းထူပေးမယ်ပေါ့နော်။ ကြည့်လိုက်တော့ ပုလိပ်လည်း ရှိနေတယ်ဆိုတော့ ပုလိပ်ပဲ ဝိုင်းထူပေးမယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကျနော်လည်း လမ်းလျှောက်လို့မရ ဖြစ်သွားတယ်။ စိတ်ထင် ကျနော်လည်း မူးသွားလို့လားပေါ့။ လမ်းနည်းနည်းလျှောက်တော့ ယိုင်တိယိုင်တိုင် ဖြစ်လာတယ်။ လှေကားအဆင်းမှာ လှုပ်လာတော့တာပဲ။ ဘူတာမှာ အသံမြည်တာ ဘူတာပြိုကျတော့မယ့်အတိုင်းပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ရထားလည်း ဝင်လာတာနဲ့ ရထားပေါ် ပြေးတက်သွားတယ်။
မေး။ ။ ဂျပန်မြေငလျင် လှုပ်ပြီးနောက် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေကို ပြောပြပေးပါလား?
ဖြေ။ ။ အများအားဖြင့် ကြောက်ကြတာပေါ့နော်။ ကြောက်ပေမဲ့လည်း သူတို့ (အစိုးရ) က ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်ပေးနေတယ်။ ပြီးတော့ ပြည်ပနိုင်ငံ အမေရိကန်၊ ရုရှ က နျူကလီးယားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပညာရှင်တွေကိုလည်း ခေါ်ထားပြီး (ပေါက်ကွဲမှု ထပ်မဖြစ်အောင်) ကြိုးစားနေကြတယ်။ ထပ်ပေါက်ရင် တနိုင်ငံလုံး ဒုက္ခရောက်မယ်လို့ ပြောနေကြတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလောက်ထိတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကျနော်ထင်တယ်။ အခု ရေဒီယိုသတ္တိကြွဓာတ်တွေ ယိုစိမ့်နေပေမဲ့လည်း နျူကလီယား ပေါက်တဲ့နေရာမှာ နှင်းလည်း ကျနေတယ်၊ မိုးလည်း ရွာနေတယ်ဆိုတော့ အဲဒီဓာတ်တွေက ဝေးဝေးကို မပြန့်နိုင်ဘူးလို့ ပညာရှင်တွေကတော့ ယူဆထားတယ်၊ သူတို့ပြောတာက အဲဒီဓာတ်တွေက ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လောက်ပဲ ပြန့်နိုင်မယ်။ လေကလည်း အနောက်ကနေ တိုက်တာဆိုတော့ အဲဒီဓာတ်တွေက ပင်လယ်ဘက်ကိုပဲ ဦးတည်ထွက်သွားတာ များတယ်။ မိုးရွာ နှင်းကျနေရင်၊ နှင်းတွေ မိုးတွေက အဲဒီဓာတ်ကို မြေအောက် ပို့ပေးတယ်။
မြေငလျင်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း သိုလှောင်လို့ရတဲ့ စားစရာ ကုန်ခြောက်တွေ ရောင်းတဲ့စျေးမှာ ဘာတခုမှ မရှိတော့ဘူး။ ကုန်ခြောက်တွေ၊ အိမ်သာသုံးတစ်ရှုးတွေ ဘာမှ မကျန်တော့ဘူး။ ကြောက်လို့ ပြည်ပကို ထွက်တဲ့လူတွေ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံကို ပြန်တဲ့လူတွေလည်း ရှိတယ်။
မေး။ ။ မွန်တွေရော ပြန်တာရှိလား?
ဖြေ။ ။ ။ ပြန်တဲ့မွန်တွေ မရှိပါဘူး။ ဒီမှာရှိတဲ့ မွန်အများစုနဲ့ အဆက်အသွယ် ရပါတယ်။ ပြန်မယ်လို့ ပြောတဲ့သူတွေ မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ သတိတော့ ထားနေရတယ်။ ကျနော်တို့ မွန်တွေ နေတဲ့နေရာနဲ့ ဖြစ်တဲ့နေရာက ဝေးတယ်။
မေး။ ။ စားရေးသောက်ရေးမှာရော အခက်အခဲရှိလား?
ဖြေ။ ။ အခက်အခဲတော့ သိပ်မဖြစ်သေးပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မြေငလျင် လှုပ်ပြီးနောက် ကျနော်တို့မွန်တွေ ဆန်တွေ ကြိုတင် ဝယ်လှောင်ထားတယ်။ ကျနော်တို့မှာက ရုံးလို ဖြစ်နေတော့ ဖြစ်ပြီးပြီးချင်း ဆန် ၁၀ အိတ်လောက်တော့ ဝယ်ထားတယ်။ ၂ လ ၃ လလောက် စားလို့ ရမယ်ထင်တယ်။
မေး။ ။ အစိုးရဆီကရော အကူအညီတွေရလား?
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့နေရာ (တိုကျို) မှာတော့ အဲဒါတွေ မရှိဘူး၊ ဖြစ်တဲ့နေရာအနီးတွေမှာတော့ အကူအညီတွေ တော်တော်လေး ဖူလုံတယ်။ ပို့လို့ရသလောက် သူတို့ ပို့ပေးတယ်။ သူတို့အစိုးရကို ကြည့်ပြီး တော်တော်လေးကို အားရတယ်။ သူတို့ပြည်သူတွေအပေါ် တော်တော်လေး စိုးရိမ်တယ်၊ ဒုက္ခရောက်မှာ ကြောက်လို့ တော်တော်ကြိုးစားတယ်။ သူတို့အစိုးရနဲ့ ကျနော်တို့အစိုးရက ဆီနဲ့ ရေလိုပဲ။ သူတို့မှာက ဖြစ်တာနဲ့ ချက်ချင်းပဲ ဘာယူရမလဲ၊ ဘာလုပ်ရမလဲ။ အခု အဲဒီနေရာမှာ ကူညီဖို့ စစ်သား ၁ သိန်းကို လွှတ်ထားတယ်။
မေး။ ။ မီးနဲ့ရေရော ပုံမှန်ပဲ ရနေလား?
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့နေရာမှာက ပုံမှန်ပါပဲ။ သတင်းကြားတာက တနေရာပဲ ရေခဏ ပြတ်သွားတယ်။ မီးတော့ အချိန်နဲ့ လာတယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံကို အတုယူလားတော့ မသိဘူး။ အလှည့်ကျ ပေးနေတယ်။ အခု ကျနော်တို့ အလုပ်ရုံမှာ မီး ၃ နာရီ ဖြတ်ထားတယ်။ အဲဒါကြောင့် အားနေလို့ ကျနော်တို့ အပြင်ထွက်နေတာ။
မေး။ ။ ဂျပန်မှာ မွန်ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ?
ဖြေ။ ။ ၁၀၀ လောက် ရှိမယ်ထင်တယ်။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့မှာတောင် မွန် ၇၀ ကျော်လောက် ရှိတယ်။
မေး။ ။ အများစုက ကျောင်းတက်တာလား၊ အလုပ်လုပ်ကြတာလား?
ဖြေ။ ။ ကျောင်းတက်တာတော့ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများဆုံး ၁၀ ယောက်လောက်ပဲ ရှိတယ်။ ဒီ့ပြင်လူတွေက အလုပ်လုပ်တာပဲ များတယ်။
မေး။ ။ ဂျပန်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သွားကြတာလဲ?
ဖြေ။ ။ တချို့တွေက အလည်အပတ် ဗီဇာနဲ့ လာတယ်။ လာပြီးတော့ ဒီမှာနေလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဒီမှာ နေထိုင်ခွင့် လျှောက်တာရှိတယ်။ ဒုက္ခသည်အဖြစ် လျှောက်တာ ရှိတယ်။ တချို့ကျတော့ သင်တန်း (Training) လာတက်ပြီးတော့ ဒီမှာ နေလိုက်တာလည်း ရှိတယ်။ တချို့ကျတော့ ကျောင်းသားအနေနဲ့ လာပြီးတော့ နေလိုက်တာလည်း ရှိတယ်။ အလုပ်ဗီဇာနဲ့ရော ရှိတယ်။ အစုံပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒုက္ခသည်အဖြစ်ပဲ နေတာ များတယ်။
မေး။ ။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ပြန်တာခက်ခဲတာလား?
ဖြေ။ ။ ဒီကနေ ခဏလောက် ရှောင်သွားကြတာပဲ ရှိတယ်။ ကိုယ်နိုင်ငံ ပြန်ဖို့ကိုတော့ ဘယ်သူမှ စိတ်မကူးကြဘူး။
Previous မွန်ပြည်နယ် ရာဘာစျေး သုံးပုံတပုံကျ
Next မိုးဖျက်ပြီး ဆားစျေး ၂ ဆကျော် တက်